व्यक्तित्व - Dalit Online
विश्वभक्त दुलाल (आहुति) नेपाली दलित राजनीतिका वैचारिक नेता हुन् । कम्युनिस्ट नेताको पहिचान बनाएका आहुतिले वैचारिक रूपमा नेपाली दलित आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै आएका छन् । बहुआयामिक परिचय भएका आहुति एक जना सफल साहित्यकार हुन् । उनका कविता र उपन्यास चर्चित छन् भने वैचारिक रचना गहन छन् । जीवनको प्रारम्भिक चरणदेखि नै कम्युनिस्ट राजनीतिमा झुकाव […]
जुझारु दलित कम्युनिस्ट अगुवा
परशुराम रम्तेल /गणेश विश्वकर्मा नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका व्यक्तित्वको नाम हो तिलक परियार । तिलक परियारको नाम नेपालको जनयुद्ध र दलित आन्दोलनसँग एकसाथ गाँसिएर आउँछ । तिलक परियारको जन्म जनयुद्धको उद्गम थलोको रूपमा स्थापित रोल्पाको सदरमुकाम लिबाङ्गमा १५ कार्तिक २००० सालमा भएको थियो । आमा भक्तिदेवी परियार र बुबा हस्तबहादुर परियारको आठौँ […]
परशुराम रम्तेल / गणेश विश्वकर्मा मिठाइदेवी विश्वकर्मा । नेपाली दलित आन्दोलनमा सबैभन्दा अगाडि रहेकी महिला नेतृ । उनको नामसँग जोडिएका छन् दलित समुदायको आन्दोलनका अनेक गाथा । ती गाथाभित्र पनि गाँसिएका छन् दलित महिलाका सङ्घर्ष–कथा । उनी नेपालको पहिलो दलित महिला सङ्गठन ‘महिला परिगणित सङ्घ २०१२ की संस्थापक अध्यक्ष हुन् । अनेक सङ्घर्षका कारण उनको […]
सीता दाहाल आमा प्रकाश जन्मने बेला उसको बुवा भूमिगत हुनुहुन्थ्यो, हामी चितवनको शिवनगरमा बस्थ्यौं । केटाकेटी, वस्तुभाउ, घरबार सबै धान्नु मेरै जिम्मेवारी थियो । सानोमा प्रकाश साह्रै बिरामी परिरहन्थ्यो । के गरी निको हुन्छ भन्दै म दौडिरहन्थें । सानोमा निकै दुख गरेर हुर्काएँ मैले । प्रकाश जन्मिएको केही महिनापछि नै हामी छुट्टियौं र क्षेत्रपुर बसाई […]
ह्दयघातबाट प्रकाशको मृत्यु भएको भएपनि उनले जीवनमा तनाव लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना नभएको भए सम्भवतः उनी बाँच्थे कि ? हरेक पाइला, पाइलामा आलोचना खेप्न नपरेको भए उनी हाँस्न सक्थे कि ? माअ‍ोवादी आन्दोलनको रिस प्रचण्डसँग फेर्ने नाममा, पार्टीभित्र नेतृत्वको विरोध गर्ने नाममा, आफूले प्रगति गर्न नसकेको कुण्ठा पोख्ने नाममा प्रकाश दाहालमाथि आक्रमण नहुन्थ्यो भने, उनको आलोचना […]
कहिले जितबहादुर अगाडि हुन्थे भने कहिले कोरियन खेलाडी । रगतले लतपतिएको खाली खुट्टाका भरमा कुदिरहेका जितबहादुर यसै कारण तेस्रो भए । नेपाली खेलकूद क्षेत्र अहिले पनि समयअनुसार परिवर्तन हुन सकेको छैन । जुनसुकै खेलको पनि न त अभ्यास नै पर्याप्त हुन्छ, न त खेलाडिलाई प्रोत्साहन नै गरिन्छ । अधिकांश खेलका खेलाडि देशका लागि भन्दै आफ्नै मिहिनेतबाट परिश्रम […]
संघर्ष गर्ने व्यक्ति कहिल्यै हार्दैनन् : पूर्व राष्ट्रिय तेक्वान्दो खेलाडी दिपक विष्ट
काठमाडौं — अधिकांश नेपालीहरुले नेपाली ते–क्वान्दो खेल ईतिहाँसमा ऐतिहासीक किर्तिमानी कमाएका पूर्व ते–क्वान्दो खेलाडी दिपक विष्टलाई नचिन्ने कमै मात्र होला । ते–क्वन्दो खेल एक शारिरीक तथा मानसिक रुपले सक्रिय भई खेलिने खेल हो । नेपाली ते–क्वान्दो खेल ईतिहाँसमा दिपकले दिएको योगदान राष्ट्रिय तस्तर था दक्षिण एसियामा नै अनमोल रहेको छ । उनको जन्म सन् १९७६ […]
रमा खड्का धेरै महिला आफूले भोगेको पीडा व्यक्त गर्न सक्दैनन्, लुकाएर राख्छन् । तर बैतडीकी सरस्वती नेपालीले आफ्नो पीडा लुकाउनुभएन । आफूले भोगेजस्तै पीडा अरुले भोग्न नपरोस् भन्ने सोचका साथ उहाँले आफ्नो जीवनलाई न्यायको क्षेत्रमा समर्पण गर्नु भयो । सुदूरपश्चिमको दलित परिवारमा ३७ वर्ष पहिले जन्मिएकी नेपालीले बैतडीमा मात्रै नभई सुदूरपश्चिममा दलित समुदाय र महिलाले […]
यस्तो थियो मदन र विद्या भण्डारीको प्रेम कथा
काठमाडौं, सादा जीवन र सिर्जनात्मक सोंचका लागि चिनिन्छन् जननेता मदन भण्डारी । दासढुङ्गा दुर्घटनामा उनको मृत्यु भयो । उनको मृत्यु आजसम्म पनि रहस्यको घेरामा नै छ । बिडम्बना भनौं, उनको मृत्युपछाडिको यथार्थ पत्ता लगाउन आजसम्म कुनै पनि सरकारले पहल गरेको छैन । मदन पत्नी विद्या अहिले देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा आसीन छिन् । उनकै सहयात्रीहरुले […]